Cuntada loogu talagalay maqaarka: xulashooyinka cuntada ugu fiican | Ragga Stylish
Cuntadaadu ma leedahay cunno ku filan maqaarka? Waxa aad cunayso waxay kaa caawin karaan in maqaarkaagu caafimaad u ahaado gudaha oo uu u ekaado mid qurxoon oo ka baxsan..
Haddii aad rabto maqaar caafimaad qaba, la ilaaliyo oo si fiican u nafaqo badan, waxyaabaha soo socda ayaa ka mid ah cuntada ugufiican maqaarka waxaad kaheli kartaa supermarket-ka.
3.1 Ka hortagga dabiiciga ah ee cuntadaada
4 Kalluunka Tuna
7 Saliid saytuun ah
8 Shaah cagaaran
Biyaha la cabo ayaa fure u ah caafimaadka maqaarka, sidaa darteed hubi inaad hesho biyo kugu filan maalin kasta. H2O waxay ka caawisaa maqaarka inuu ilaaliyo heerarka qoyaanka saxda ah, Muuqaal ah in, haddii aad ka walaacsan tahay laalaabka iyo khadadka ganaaxa, waa inaad tixgelisaa. Dareenkan, isticmaalka huurka (sida ugu fiican haddii ay la socoto qorraxda) sidoo kale waa caado aad muhiim u ah.
Biyaha kuma koobna oo kaliya qoyaanka maqaarkaaga, sidoo kale waxay ka caawisaa nafaqeynta, ka nadiifinta sunta iyo ilaalinta dhiigga socodka caafimaadka. Sidaa awgeed, biyuhu waa mid ka mid ah xulafada ugu weyn ee maqaarka. Waxaad ku heli kartaa biyo habka ugu fudud (adoo qaadanaya galaas wanaagsan oo biyo ah), iyo sidoo kale iyada oo loo marayo noocyo kala duwan oo cuntooyin ah, tan ugu xiisaha badan waa miro iyo khudaar taas oo ay ugu wacan tahay tirada badan ee fiitamiinada iyo macdanta ay jirka ku kordhinayaan.
Mushrooms waxaa ku jira selenium, macdan ka ilaalisa jirkaaga xagjirnimada bilaashka ah, taas oo u horseedi karta duuduub iyo maqaarka qalalan dhaawaca unugyada iyo kansarka maqaarka. Haddii aadan ahayn taageere likaha, waxaad ka heli kartaa macdantaan iyada oo loo marayo cuntooyin kale oo badan. Baastada qamadiga oo dhan, lowska Barasil, cows, oysters, iyo kaluunka sida kaluunka, halibut, tuna, salmon, iyo sardines sidoo kale waxay leeyihiin selenium.
Antioxidants kama maqnaan karo cunto kasta oo loo arko inay caafimaad tahay, maadaama ay muhiim u yihiin dhinacyo badan oo caafimaadka ah, oo ay ku jiraan xaaladda maqaarka. Dhaawaca xagjirka ah ee bilaashka ah ee maqaarka wuxuu leeyahay daawo ka hortag ah: yaanyo iyo antioxidants-ka. Si loo hubiyo in cuntada ay hodan ku tahay antioxidant-ka, cuntooyinka ay ka mid yihiin buluugga, miraha loo yaqaan 'raspberries', 'blackberries', abrikotka, xididdo, isbinaajka, baradhada macaan, liin macaan, iyo basbaasku waa inaysan ka maqnayn cuntadaada. Guud ahaan, dhammaan khudradda iyo khudradda midabada leh waxay u fiican yihiin maqaarka.
Ka hortagga dabiiciga ah ee cuntadaada
Fiiri maqaalka: Ka hortagga dabiiciga ah. Halkaas waxaad ka heli doontaa wax walba oo ku saabsan antioxidants, laga bilaabo howlaha ay qabtaan ilaa cuntooyinka iyaga siiya tiro badan.
Ma maqashay coenzyme Q10? Haddii aadan sidaas sameyn, waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato inay fure u tahay howlo dhowr ah oo jirka ah. Waxaa lagu soo qaataa tuna, mid ka mid ah doorarka coenzyme Q10 ee jirka ayaa si sax ah u ilaaliya maqaarka xaalad wanaagsan. Jidhku si dabiici ah ayuu u sameeyaa, laakiin sannadaha ka dib, waxsoosaarku wuu yaraadaa. Nasiib wanaag, waxaad ku heli kartaa antioxidant-kan, oo lala xiriiriyay la dagaallanka calaamadaha gabowga, iyada oo loo marayo cuntooyinka sida tuna, digaagga, iyo miraha oo dhan.
Karootada ayaa ka mid ah cuntooyinka maqaarka ugu caansan. Faa'iidooyinkeedu waxay qayb ahaan ka yimaadaan faytamiin A-ga, taas oo ka hortageysa maqaarka qalalan, cilladaha iyo duuduubka. Waxa kale oo xiiso leh la dagaalanka finanka iyo dhibaatooyinka kale ee maqaarka. Cuntooyinka kale ee lagu rakibo fitamiin A maqaarka u fiican ayaa waxaa ka mid ah kantaloupe, ukumo, cagaarka caleenta, iyo caanaha dufanka yar.
Kiwi wuxuu maqaarkaaga ka ilaaliyaa waxyeelada ay falaadhaha qorraxdu u geystaan ​​collagen iyo elastin, taas oo, iyo waxyaabo kale, ka caawiya maqaarka inuu ahaado mid adag. Sirtu waxay ku jirtaa vitamina CBasbaaska casaanka, babaygu, broccoli, sprouts-ka Brussels iyo guud ahaan miraha liinta ayaa sidoo kale ah xulashooyin aad u wanaagsan si loo hubiyo qiyaas caafimaad leh maalin kasta oo fitamiin C
Waxyeellada qorraxda waa mid ka mid ah cadowga ugu weyn ee maqaarka, fitamiin C-na maahan istiraatiijiyadda keliya ee aad qaadan karto si loola dagaallamo. Saliida saytuunka waxaa ku jira dufan caafimaad leh, oo jilciya una cusbooneysiiya maqaarka. Flaxseed, walnuts, salmon, iyo sardines sidoo kale waxay leeyihiin saameyn isku mid ah maqaarkaaga.
Saliida saytuunka waxay kaloo siisaa fiitamiin E, antioxidant kaas oo, sida fiitamiin C, maqaarka uga ilaaliyo falaadhaha cadceedda. Saliidaha qudaartu waa ilo fiican, laakiin sidoo kale waxaad heli doontaa qaddar maqaarkaaga ah haddii aad ku darto lowska, iniinyaha, asparagus, iyo caleenta cagaaran ee cuntadaada.
Marka ay timaado cuntooyinka maqaarka, mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa shaaha cagaaran. Cilmi baaris ayaa muujisay inay kaa caawineyso inaad wax ka qabato hanjabaado badan, oo ay ku jiraan caabuq iyo waxyeelada qorraxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntada maqaarka
Sidee loo isticmaalaa kareemka wasakhaysan
5 ciyaaraha jimicsiga ee dugsiga sare